Videon အသစ် EdgeCaster Edge Compute Encoder သည် Ultra-Low-Latency Live Streaming ကို Ultra-Low Cost ဖြင့် Enable လုပ်သည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » နယူး Videon EdgeCaster Edge Compute ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာက Ultra-အနိမျ့ကုန်ကျစရိတ်မှာက Ultra-အနိမျ့-latency တိုက်ရိုက်လွှဖွင့်မည်
နယူး Videon EdgeCaster Edge Compute ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာက Ultra-အနိမျ့ကုန်ကျစရိတ်မှာက Ultra-အနိမျ့-latency တိုက်ရိုက်လွှဖွင့်မည်
ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာ, Pa - ။ ဇန်နဝါရီလ 31, 2019 - Videon, 4K တစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းတီထွင် HD မည်သည့်မျက်နှာပြင်မှမဆိုအရင်းအမြစ်မှမီဒီယာရွှေ့ဖို့အသုံးပြုသူများကို enable ပြုလုပ် streaming များထုတ်ကုန်သစ် EdgeCaster အစွန်း Compute အန်ကုဒ်နှင့်အတူနိမ့်-ကုန်ကျစရိတ်, အောက်ပိုင်း-အောင်းနေချိန်တိုက်ရိုက်လွှင့်အဘို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် prosumer ဝယ်လိုအား addressing ဖြစ်ပါတယ်။ Videon ရဲ့ထူးခြားတဲ့အစွန်း Compute encoding ကနည်းပညာကိုအလှည့်အဖြစ်အနည်းငယ်သာ <အဖြစ်4စက္ကန့်မှအောင်းနေချိန်လျှော့ချခြင်းနှင့် 50% အထိပျမ်းမျှအသုံးပြုသူရဲ့ streaming များကုန်ကျစရိတ်ဖြတ်တောက်အတွက် cloud-based အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်အလွှာကို bypass လုပ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အ EdgeCaster အစွန်း Compute အန်ကုဒ်အစဉ်အဆက်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်မှအရည်အသွေးမြင့် streaming များအကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းထက်လွယ်ကူပြီးပိုချွေစေသည် - တိကျတဲ့ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားဒေသများထံအပ်နှံကြည့်ရှု၏သေးငယ်အုပ်စုများ - ယနေ့အကြောင်းအရာစားသုံးမှု၏လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာဝေစုကိုကိုယ်စားပြုကြောင်း," Todd Erdley, Videon ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ "အသုံးပြုမှုလွယ်ကူ, အနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်တစ်ဦးအနိမ့်သောစျေးနှုန်းအမှတ် EdgeCaster အသုံးပြုမှုဖြစ်ပွားမှု၏ကျယ်ပြန့ဖြတ်ပြီးတစ်ေူပာင်းလဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များ option ကိုအောင်ပေါင်းစပ်။ "
ရိုးရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များမော်ဒယ်များအောင်းနေချိန်၏ 20 သို့မဟုတ် 30 စက္ကန့်ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, ရိုးရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အောင်းနေချိန်၏5စက္ကန့်ကိုမိတ်ဆက်။ Videon ရဲ့ EdgeCaster အစွန်း Compute အန်ကုဒ်နည်းပညာအများပြည်သူအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုပြီးပြန်ဖွင်မှကင်မရာကိုမှ <4 ဒုတိယအောင်းနေချိန်နှင့်အတူပေါ်ထွက်လာ applications များ၏ကျယ်ပြန့နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ EdgeCaster HD ကွန်ယက်အစွန်းမှာထိထိရောက်ရောက်သည်ဤတာဝန်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းအားဖြင့်မိုဃ်းတိမ်၌ - transcoding, HLS ဖွ / Dash မှ RTMP ထံမှ repackaging format နှင့်မျိုးစုံနည်းနည်းနှုန်းထားများ၏ဖန်ဆင်းခြင်း - နှင့် EdgeCaster 4K ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများမိုးသည်းထန်စွာကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းစဉ်များပပျောက်။ ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပါ Videon ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာများပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်နှောင့်နှေး-အထိခိုက်မခံသောဗီဒီယို applications များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းထဲမှာစီးနှုန်းနိမ့် fixed ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်စီးနှုန်းကြည့်ရှု၏ကန့်သတ်နံပါတ်များကိုမှမြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ကို streaming နှင့်အတူပလီကေးရှင်းကိုဆက်ကပ်။
အဆိုပါ prosumer, လိုလားသူ AV စနစ်နှင့်အသံလွှင့်စျေးကွက်များတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့တည်, ထို EdgeCaster လိုင်း Ultra-Low-အောင်းနေချိန် streaming များ, ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာအစွန်း Compute အပြောင်းအလဲနဲ့, ရှေ့ဆက်အမှားဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း, အပြည့်အဝ duplex encoding က / ဒီကုဒ်ဒါအပါအဝင်စွမ်းရည်နှင့်အတူ set တစ်ခုအဆင့်မြင့် streaming များ feature ကိုကမ်းလှမ်း ။
အဆိုပါ EdgeCaster HD ထက်နည်း4စက္ကန်အောင်းနေချိန်ဝါကြွားနှင့်မျိုးစုံ RTMP, SRT နှင့် HLS ဖွထောက်ခံမှုပေးသည်။ 4K6 အထိအဆိုပါ Videon EdgeCaster 265K သည်ဤစွမ်းရည်များပါဝင်သည်အပေါင်း4အထိထွက်ရှိနိုင်စွမ်းမျိုးစုံနည်းနည်းနှုန်းထားများ / ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာတစ်ပြိုင်နက်စီး, Ethernet (poe) ကျော်အာဏာ H.30 / HEVC များအတွက်ထောက်ခံမှု, နှင့်ဗီဒီယို resolution ကို။
အသစ် EdgeCaster အစွန်း Compute အန်ကုဒ်လိုင်း ISE 2019 မှာ၎င်း၏ပွဲဦးထွက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Videon အဆိုပါ EdgeCaster တင်ပို့စတင်မည် HD အဆိုပါ4စဉ်နှင့် EdgeCaster 2019K NAB ပြရန်.
Videon နှင့်၎င်း၏နည်းပညာများကိုအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် streaming.videon-central.com/.
Videon ဗဟို 4K တစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဖြစ်ပြီး HD မည်သည့်မျက်နှာပြင်မှမဆိုအရင်းအမြစ်မှမီဒီယာရွှေ့ဖို့ prosumers နှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို enable ပြုလုပ်ထုတ်ကုန် streaming ။ ကုမ္ပဏီ၏ streaming များစနစ်များကိုအရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုရိုးရှင်းတဲ့ပိုမိုချွေတာ streaming များကို enable စဉ်တွင်၎င်း၏ module တွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကူအညီနဲ့ထုတ်လုပ်သူအကျိုးခံစားရရှိရေးကို၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဦးဆောင်ဆီလီကွန်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီများနှင့်မိတ်ဖက်မှတဆင့် Videon နည်းပညာထက်ပိုမို 30 သန်း devices များသို့ထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုံနည်းပညာကုမ္ပဏီထက်ပိုဖြစ်ခြင်းထံအပ်နှံ, Videon တက်ကြွစွာ၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းက၎င်း၏ဝန်ထမ်းများကိုထောက်ခံပါတယ်, နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်။
Videon ရိုးရှင်းစွာမီဒီယာလှုံ့ဆော်ပေး။ www.videon-central.com
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Videon/190131Videon.docx
ဓာတ်ပုံ Links များ:
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Videon ရဲ့ EdgeCaster
Booth 2019-R15 အတွက်အမ်စတာဒမ်အတွက် ISE 327 မှာ Videon သွားရောက်ကြည့်ရှု
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/tweet?text=New%[အီးမေးလျ protected]_central%20Edge%20Compute%20Encoder%20Enables%20Ultra-Low-Latency%20Live%20Streaming%20at%20Ultra-Low%20Cost%20%23ISE2019%20-%20http://bit.ly/2GbOJcA
Facebook က: www.facebook.com/videon.central
LinkedIn တို့: www.linkedin.com/company/videon-central/
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ4စက္ကန့် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ပြသမှုမှကင်မရာ edge Compute ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ EdgeCaster isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ် NAB 2016 NAB16 ultra-အနိမျ့ကုန်ကျစရိတ် ultra-အနိမျ့-latency Videon 2019-01-31
ယခင်: Litepanels နယူး Dual-ဘက်ထရီကွင်းစ, ကြမ်းပြင်ရပ် Kit များနှင့်ဖျ Carry ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အတူ Gemini2× 1 Softlight ၏အိတ်ဆောင်ပါဝါစှမျးတိုးချဲ့
နောက်တစ်ခု: TVN Enhanced Newsgathering Capability များအတွက် TVU ကွန်ယက်နှင့်အတူပူးပေါင်း